Ihe ndi ozo - Prairie State Legal Services
ILLINOIS IWU AID ONLINE
Illinois Legal Aid Online na-enye ndị bi na Illinois ozi iwu-enyi na enyi, akwụkwọ agụmakwụkwọ na ụdị, enyemaka onwe onye, ​​na ihe ndị ọzọ metụtara ya. N'ebe ahụ, ị ​​nwere ike ịchọta ozi gbasara ikike na ọrụ iwu gị, ndị na-ezigara ụlọ ọrụ enyemaka iwu na-akwụghị ụgwọ na ọnụ ala, yana ụdị na ntuziaka maka ịnọchite onwe gị.
biko gaa na ilinoislegalaid.org maka ozi ndị ọzọ.
NSỌ NWERE Onwe-aka na ILLINOIS
Ọtụtụ ụlọ ikpe nwere "-lọ Ọrụ Na-enyere Onwe Ha Aka," ebe ọha na eze nwere ike ịnweta ozi iwu ziri ezi na nke ugbu a chọrọ ha. Offọdụ n'ime ha nwere ndị ọkwọ ụgbọ mmiri ma ọ bụ ndị ọrụ ọzọ nwere ike inyere gị aka ịchọta ozi ziri ezi. Site na ịnweta ozi a, ndị na-enweghị ndị ọka iwu nwere ike ịkọwa onye ọka ikpe nke ọma ha ma dozie nsogbu iwu ha n'onwe ha. Ọtụtụ ebe enyemaka onwe onye dị na ụlọ ikpe ahụ, mana ụfọdụ nọ n'ọbá akwụkwọ - pịa njikọ dị n'okpuru iji chọta ebe enyemaka onwe gị na mpaghara gị.
Pịa ebe a iji lee ndepụta nke Selflọ Ọrụ Onwe-Onwe Gị.
Iwu ọrụ ụlọ ọrụ (LSC)
Serviceslọ Ọrụ Ọrụ Iwu (LSC) bụ ụlọ ọrụ kwadoro n'ihu ọha, ụlọ ọrụ na-enweghị uru 501 (c) (3) nke United States Congress guzobere. Ọ na-achọ iji hụ na enwere ohere ịnweta ikpe ziri ezi n'okpuru iwu maka ndị America niile site na ịnye ego maka enyemaka gbasara iwu obodo nye ndị na-agaghị enwe ike ịkwụ ụgwọ ya. Emepụtara LSC na 1974 site na nkwado ọgbakọ omebe iwu bipartisan ma kwụọ ụgwọ ya site na usoro mmemme ọgbakọ.
biko gaa na lsc.gov/ Nso-mbukara-aid/find-legal-aid ịchọta onye enyemaka iwu na mpaghara gị.
Enyemaka Enyemaka Iwu & Enyemaka Mgbakọ (NLADA)
NLADA bụ ụlọ ọrụ kacha ochie na ndị na-enweghị ọrụ nke America kachasị mma na nnyefe nke ọrụ iwu na ndị na-enweghị ike ị nweta ndụmọdụ. Ha na-enye nkwado, nduzi, ozi, ọzụzụ na enyemaka teknụzụ maka ndị otu obodo ikpe ziri ezi, ọkachasị ndị na-arụ ọrụ nchekwa ọha na enyemaka ndị ọka iwu obodo.
biko gaa na nlada.org/about-nlada ịmụta ihe
Ezinụlọ na nchekwa. Ị maara maka otu ụzọ n'ụzọ anọ (26%) nke ezinụlọ niile na-akpata obere ego enwetala opekata mpe otu nsogbu metụtara ihe gbasara ezinụlọ ma ọ bụ nchekwa nke onwe. Ọgbasa ya dị elu nke ukwuu n'ime ezinụlọ nwere ụmụaka na-erubeghị afọ iri na abụọ (12%). Nsogbu ndị a na-ahụkarị na ezinụlọ niile na mpaghara a gụnyere ahụmahụ na ime ihe ike n'ụlọ (na-emetụta pasent 44 nke ezinụlọ niile), nsogbu ịnakọta ma ọ bụ ịkwụ ụgwọ nkwado ụmụaka (10%), na nkewa ma ọ bụ ịgba alụkwaghịm (9%). Isi mmalite: Nnyocha nleba anya nha ikpe ziri ezi LSC 2021	... Lee MoreLee obere